जसपा र लोसपा दुवै पार्टी फेरि फुट्दै, नेताहरूबीच नै बोलचाल बन्द - Media Dabali
जसपा र लोसपा दुवै पार्टी फेरि फुट्दै, नेताहरूबीच नै बोलचाल बन्द
काठमाडौं - आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका नेपालका दुई मधेस केन्द्रित दल जसपा र लोसपा फेरि फुट्ने भएका छन् । पटक पटक विभाजन भएर रेकर्ड नै राख्दै जुट्दै गरेका दुई दलका नेताहरू आपसमै बोलचाल बन्द छ ।
कतिसम्म भने जसपा विभाजन भएर नयाँ पार्टीका रुपमा मान्यता पाएको साढे चार महिना नपुग्दै लोसपामा दुई गुटबीच विभाजनको रेखा देखिन थालेको छ। भदौ ९ गते नै स्थापना भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशभर संगठन विस्तार गरिसक्दा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू आपसमै बोलचाल बन्द गरेर बसेका छन् ।
लोसपाले पार्टी कमिटीलाई पूर्णता दिनु त परै जाओस् एकपटक पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्न सकेको छैन। लोसपा विधानमा हरेक १५ दिनमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ। पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष ठाकुर दैनिक पुग्छन् र दुई तीन घण्टा बस्छन्। तर, बैठक राख्दैनन् । लोसपाका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो ठाकुरसँग असन्तुष्ट छन्।
महतोले केन्द्रीय कार्यालयमा पाइला नटेकेको डेढ महिना भइसकेको बुझिएको छ। उनले आफ्ना नेता–कार्यकर्तासँग गजेन्द्रनारायण सिंह अध्ययन केन्द्रमा भेटघाट गरिरहेका छन्।
महन्थ ठाकुरले जिम्मेवारी दिँदा तत्कालीन तमलोपामै रहेका नेताहरुलाई महत्व लिएपछि महतोलगायतका नेता आक्रोशित भएका हुन् । त्यस्तै, जसपा पनि विघटनको दिशामा पुगेको छ ।
बाबुराम भट्टराई, नवराज सुवेदी, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरू अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्नै मान्दैनन् । स्थानीय निर्वाचनअघि नै इतर पक्षका नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो ।
सोही कारण यादवले बोलाएको बैठकमा बाबुराम पक्षका नेताहरू जान छाडेका छन् । केही समययता जसपाको पार्टी गतिविधिमा उपेन्द्र मात्रै देखिएका छन् । बाबुराम भट्टराईहरू मौन छन् ।
जसपा सिध्याउँदै ओली, राजेन्द्र महतो तनावमा
केपीको इशारामा विद्यालाई भेट्न शितलनिवास पुगे ठाकुर र महतो, के पाक्दैछ खिचडी ?
जसपामा सुटुक्क राजेन्द्र महतोको नयाँ ट्वीस्ट, डा. बाबुराम के गर्दैछन् ?
ओली सरकारमा सहभागी हुनेबारे निर्णय लिन राजेन्द्र महतोले बोलाए आकस्मिक बैठक, के छ तयारी ?
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले राजपा दर्ता गर्ने, उपेन्द्र यादवलाई आपत !
यादव देउवाको सरकार बनाउन खटिरहेको बेला ठाकुरले पाए यति ठूलो सफलता
मंगलवार, जेठ १८ २०७८०५:०९:५२
# महन्त ठाकुर # उपन्द्र यादब